कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १२ गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख १२ गते)
काठमाडौँ ०७७ वैशाख १२ गते
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको छ । जनस्वास्थ्य अधिकृत, प्रयोगशालाका कर्मचारी र प्यारामेडिक्स वा नर्स एक-एक जना रहेको टोली परिचालन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकाटाका अनुसार हरेक गाउँपालिकामा एउटा, नगरपालिकामा दुई ओटा, उपमहानगरपालिकामा तीन ओटा र महानगरपालिकामा पाँच ओटाको दरले टोली परिचालित हुनेछन् । हाल नेपालमा ४ सय ६० गाउँपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ ओटा महानगरपालिका गरी ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तह छन् । टोलीले कोराना शङ्कास्पद व्यक्ति र उनीहरूको निकट सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति पत्ता लगाएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा देशभर पीसिआर विधिबाट ९ हजार ४ सय ७ र आरडीटी विधिबाट ३८ हजार ८९ जनाको परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो २४ घण्टाभित्र देशभर ३ हजार ७ सय ९१ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका समेत बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार आरडिटी विधिबाट प्रदेश १ मा ३ हजार ९ सय ९२, प्रदेश २ मा ४ हजार ९ सय ७७, बागमती प्रदेशमा ७ हजार १ सय ४३, गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार ७ सय ८३, प्रदेश ५ मा २ हजार ८ सय ७४, कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार ८ सय ७४ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ९ हजार ५ सय १३ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ ।
उहाँले हालसम्म देशभरी १२ हजार ९ सय ८५ जना क्वारेण्टाइन र नौ जना आइसोलेसनमा रहेको बताउनुभयो । वैशाख १२ गते ६८ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकमा कोरोना देखिएपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४९ पुगेको हो । हालसम्म नेपालमा कोभिड १९ बाट सङ्क्रमित हुनेहरुको सङ्ख्या ४९ रहेको र १० जना डिस्चार्ज भइसकेका छन् । ३९ जनाको उपचार जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा वैशाख १२ गते झापाका ६२ वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टी भएको छ । वैशाख १२ गते वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा ती पुरुषमा कोरोना भाइरस देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा वैशाख १२ गतेसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३२ जना पुगेको छ । उदयपुरका २६ जना, विराटनगरका चार जना, भोजपुर र झापाका एक/एक जना गरी ३२ जना पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश १ मा पीसीआर विधिबाट वैशाख १२ गतेसम्म ९ सय ६ जना शङ्कास्पद व्यक्तिको नमूना सङ्कलन गरिएको छ । नमूना सङ्कलन गरिएका मध्ये २ सय ४३ जना महिला र ६ सय ६३ जना पुरुष छन् । उनीहरूमध्ये ८७ जना महिला र ४ सय ९६ जना पुरुषको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । र्‍यापीड डायग्नोष्टिक टेष्ट विधि (आरडीटी) बाट ४ हजार १ सय ६० जनाको नमूना परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएकामा ६ सय ७६ जना महिला र ३ हजार ८ सय ८४ जना पुरुष छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनमा वैशाख १२ गतेसम्म १ हजार १ सय ६३ जना बसेका छन । ४३ जना डिस्चार्ज भएका छन् । आइसोलेशनमा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा ३० जना छन् । होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या ५ हजार ३ सय ८७ जना बसिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेमा महिला ९ सय ३ जना र पुरुष ४ हजार ४ सय ८४ जना रहेका छन् ।
वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनलका पूर्व क्षेत्रीय व्यवस्थापक विनय अमात्यले २ सय १५ ओटा पीपीइ सेट, ३२ थान आईआर थर्ममिटर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई वैशाख १२ गते हस्तान्तरण गर्नु भयो । वर्ल्ड भिजनले प्रदेश सरकारलाई एन ९५ मास्क, सर्जिकल मास्क, मेडिकल प्रोटेक्टीभ क्लोथ, इलेक्ट्रोनिक थर्मोमिटर, ग्लोब्स, हृयाण्ड सेनिटाईजर लगायतको १० प्रकारका सामाग्री समावेश गरिएको २ सय १५ थान पीपीइ सेट हस्तान्तरण गरिएको वर्ल्ड भिजन फिल्ड कार्यालयका पब्लिक इन्गेजमेन्ट स्पेश्लीष्ट प्रमिल अधिकारीले जानकारी दिनु भयो । ती सामग्रीहरू ३४ लाख रुपियाँ बराबरको रहेको छ ।
प्रदेश १ सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा वैशाख १२ गतेसम्म २८ करोड ७८ लाख ८६ हजार ७ सय २५ रुपियाँ जम्मा भएको छ । कोषमा प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपियाँ जम्मा गरेको थियो । कोषबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि १२ करोड ६ लाख रुपियाँ खर्च भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लेखा अधिकृत योग्यप्रसाद राईले जानकारी दिनु भयो ।
कनकाई नगरपालिकाको पहलमा अनुदानमा प्राप्त युरिया मल आपूर्ति हुन थालेको छ । मल अभावको समस्या झेलिरहेका नगरपालिका क्षेत्रका कृषकलाई मलको आपूर्ति हुन थालेसँगै केही राहत महसुस गरेका छन् । १८ सय बोरा युरिया कृषकलाई वितरण गरिने तयारी छ ।
प्रदेश २ मा वैशाख १२ गतेसम्म कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद ६ सय ६६ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ६ सय १६ को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने पाँच जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । ४५ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, वैशाख १२ गतेसम्म आरडीटी किटबाट परीक्षण ४ हजार ३ सय ३१ जनाको गरिएकोमा ४ हजार ३ सय २२ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने नौ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । पोजेटिभ रिपोर्ट आएकामध्ये आठ जनाको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने एक जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा १ सय ६४ क्वारेन्टाइनमा ३ हजार ६ सय ५ बेड सङ्ख्या रहेको छ । वैशाख १२ गतेसम्म १ हजार ३ सय ६६ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने १ हजार ६ सय ३९ जना होम क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् । कोरोना आशङ्का गरिएका १३ जना बिरामी आइसोलेशन वार्डमा उपचारार्थ छन् । प्रदेशमा आइसोलेशन बेड सङ्ख्या २ सय २७ रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकुले वैशाख १२ गते ३ सय २० ओटा भिटिएमसहित प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मी सप्तरी पठाएको छ । भिटिएम आएपछि सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावित सप्तरीको बोदे बर्साइन, सुरुङ्गा र सप्तकोशी नगरपालिकामा वैशाख १३ गते स्वाब सङ्कलन हुने भएको छ । महाशाखाका प्राविधिक फणिन्द्र ज्ञवालीले बोदे बर्साइन नगरपालिका-५ जाँजर, सुरुङ्गा नगरपालिका-११ अरहा भजक्का र सप्तकोशी नगरपालिका-१ फत्तेपुरमा केन्द्र स्थापना गरी स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइने जानकारी दिनु भयो । महाशाखाकै अनुरोधमा स्वाब सङ्कलन गर्न ल्याब टेक्निसियनहरूको छाता सङ्गठन मेडिकल ल्यावोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान) खटिएको जानकारी दिनुहुँदै मेलानका केन्द्रीय सचिव रोशन परियारले जिल्लामा रहेका मेलानका सदस्यहरू समेत स्वाब सङ्कलन कार्यमा खटिने जानकारी दिनु भयो । गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दास, डा. रणजित झा, स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादव, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका किरण खड्काको उपस्थितिमा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल (ठाको देवी-जोगेन्द्र भगत) रूपनीका ल्याब असिस्टेन्ट टंकराज राई, सिएमए हरिप्रसाद साहलगायत अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका प्राविधिकहरूले स्वाब सङ्कलन कार्यमा खटिनु अघि नमूना परीक्षण र अभ्यास गरेका छन् ।
धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका-१ लवकुश बजारमा ठेलामा नास्ता बेचिरहेको देखेपछि लकडाउनको पालना गराउन पुगेका बटेश्वर प्रहरी चौकिका असइ शिवशंकर यादव र हवल्दार नागेन्द्रप्रसाद सिंहमाथि वैशाख १२ गते स्थानीय बासिन्दाले हातपात गरेको असई यादवले बताए । सामूहिक रूपमा आफू र हवल्दारमाथि हातपात भएकाले महेन्द्रनगरका प्रहरी इन्स्पेक्टर पप्पु नायक, बटेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउत, वडा- १ का वडाध्यक्ष शैलेन्द्र महतो, वडा- २ का अध्यक्ष गंगाराम कुवरलगायतका प्रतिनिधिहरूले घटनामा संलग्नहरूको खोजी कार्य भइरहेको वडाध्यक्ष शैलेन्द्र महतोले बताउनु भयो ।
गौशाला नगरपालिकामा स्थानीय सरकारले वितरण गरेको खाने तेलका कारण सात जना विरामी परेका छन् । राहतमा बाँडिएको खानेतेलमा तरकारी पकाएर खाएपछि उनीहरू बिरामी परेका हुन् । सोही नगरपालिका-४ का १२ वर्षीया रामवती सदा, ३० वर्षीय श्रीचन सदा लगायत ६ जनालाई पखाला लागेको हो । राहतमा खाने तेलको नाममा अमृत ब्रान्डका प्रशोधित पामोलिन खाने तेल वितरण गरेको भन्दै वैशाख १२ गते दिउँसो स्थानीय महिलाहरूले नगरपालिकाको कार्यालय समेत घेराउ गरेका छन् । गौशाला नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले बिरामी भएकाहरूको उपचार र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
राहत सामग्री खरिद एवम् प्याकिंग गर्ने कार्यमा संलग्नहरूसँग स्पष्टिकरण लिने वडाध्यक्ष रामबाबु साहले बताउनु भयो ।
लकडाउनको एक महिनाको अवधिमा दोलखामा करिब ९० ओटा सवारी साधानमार्फत खाद्यान्न ल्याइएको छ । दोलखा उद्योग वाणीज्य सङ्घका अनुसार लकडाउन भएको एक महिनाको अवधिमा ९० ओटा सवारी साधनलाई पासको व्यवस्था गरि दोलखामा खाद्यान्न ल्याईएको हो । सङ्घका अध्यक्ष गेल्बु शेर्पाले जिरी नगरपालिकामा २ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी दिनु भयो ।
भक्तपुरका इँटाभट्टामा काम गर्ने १७ हजारभन्दा बढी मजदुरलाई घर फर्काइएको छ । अझै करिब २ हजार ४ सय मजदुर इँटाभट्टामा अलपत्र छन् । इँटाभट्टामा अलपत्र रहेका मजदुरलाई पनि घर पठाउने तयारी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । भारतीय मजदुरलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय नाका नखुलेसम्म पठाउन नसकिने भएकाले उनीहरुको खाने र बस्ने व्यबस्थापन इँटाभट्टा सञ्चालकहरूले नै गर्नुपर्ने भएको छ ।
सिन्धुलीको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट ११ जना महिलाले मनोपरामर्श सेवा लिएका छन । उनीहरूले कोरोना आशङ्का तथा त्रासका कारण मनोपरामर्श सेवा लिन आएको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका घटना व्यवस्थापक सुनिता शर्माले बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशमा वैशाख १२ गते २० जनाको नमूना सङकलन गरी परीक्षणको लागि पठाइएको छ । प्रदेशमा हालसम्म कुल ५ सय ६४ जनाको नमूना परीक्षण भएको छ । जसमा ५ सय ४० जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने २२ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । बागलुङ जिल्लाका दुई जना सङ्क्रमितमध्ये एक जना घर फर्किएको र एक जना धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङको आइसोलेशन वार्डमा उपचाररत छन् । गण्डकी प्रदेशमा वैशाख १२ गतेसम्म ४ हजार ८ सय ७१ जनाको र्‍यापीड डाइगनोष्टिक टेष्ट किटबाट कोरोना परीक्षण गरिएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. बिनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकास्तरिय मानव अधिकार समूहकी सदस्य निर्मला अर्यालको पहलमा वडा नं ७ का विपन्न परिवारमा राहत वितरण गरिएको छ । अर्यालले पोखरा मनपा-७ मासबारमा बस्ने मजदुरहरूलाई वडासँग समन्वय गरी राहत प्रदान गराउनु भएको हो ।
वैशाख ११ गते राति गाडीमा काठमाडौँबाट म्याग्दी आएका ३१ जनालाई स्थानीय तहमा बनाइएका क्वारेण्टाइनमा राख्न थालिएको छ । म्याग्दीमा हाल १८ जना महिला र ४४ जना पुरुष गरी ६२ जना क्वारेण्टाइनमा रहेका छन् । त्यसै गरी घाँसाका स्थानीयवासीले मुस्ताङ हुँदै डोल्पा जान आएका ३५ जनालाई घाँसाबाटै पोखरातर्फ फिर्ता पठाएका छन् ।
प्रदेश ५ मा पीसीआर विधिबाट १ सय ८२ जनामा कोरोना परीक्षण गरिएकामा ६ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने १ सय ७६ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । आरडीटी विधिबाट २ हजार ८ सय ७४ जनाको परीक्षण भएको छ । वैशाख १२ गतेसम्म प्रदेश ५ मा कोरोना सङ्क्रमित फेला परेका छैनन् । प्रदेश ५ मा १० हजार ९ सय २६ क्वारेण्टाइन बेड रहेकामा ६ हजार ५ सय १ जना क्वारेण्टाइनमा राखिएको छ भने ५ सय ३४ आइसोलेशन बेड रहेकामा १९ जना आइसोलेशनमा रहेका सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लकडाउनका कारण किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी विक्री गर्न र उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन कृषि ज्ञान केन्द्र दाङले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएको छ । बाँकेमा नेपाल भारत सीमा नजिक क्वारेण्टाइनमा राखिएका २६ जिल्लाका १ सय ८१ जनालाई वैशाख १२ गते घर पठाइएको छ । रुपन्देही जिल्लामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण अवरुद्ध भएको नियमित खोप कार्यक्रम बुटवल उमनपाले वैशाख १२ गतेदेखि सुरू गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा १ सय ५८ जनाको थ्रोट स्वाब परीक्षण गरिएकामा १ सय ५५ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको र तीन जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रयोगशालाका निमित्त प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले बताउनु भयो ।
विभिन्न जिल्लाबाट फर्किरहेका नागरिकलाई कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा उद्धार गर्ने कार्य जारी रहेको छ । प्रदेशको सीमाना बबई पुलबाट वैशाख १० गते २ हजार एक सय ३१ र ११ गते १ हजार २० जनालाई उद्धार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्पर्कमा पठाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतनिधि वाग्लेले बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईको अध्यक्षतामा वैशाख ११ गते बसेको दैवी प्रकोप उद्दार, समिति, हुम्लाको बैठकले नेपालगञ्ज सुर्खेतलगायतका शहरमा अलपत्र परेका हुम्लाबासी हवाइसेवाबाट उद्धार गर्ने र उनीहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिका अध्यक्षको जिम्मा लगाई १४ दिन क्वारेण्टाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
जुम्ला जिल्लामा दैनिक ५ सयभन्दा बढी मानिस भित्रिने क्रम जारी छ । पहिले भित्रिएका सबै जनाको क्वारेन्टाइनमा राखेर नियमित चेकजाँच गरिएको थियो भने पछिल्लो समयमा भित्रिएका अलपत्र भनिएका नागरिकहरू घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्ने भन्दै क्वारेन्टाइनमा बस्न मान्दैनन् । जसले गर्दा जोखिम बढ्ने उच्च सम्भावना रहेको छ । कालीकोट जिल्ला सदरमुकाम मान्म, जिते, पिलिलगायत विभिन्न बजारहरूमा तरकारी तथा फलफूलको अभाव हुन थालेको छ ।
आरडीटी परीक्षणका क्रममा एन्टिबडी पोजेटिभ देखिएका अछामकी २० वर्षीया युवती र ६० वर्षीय वृद्धको कोरोना सङ्क्रमण नभएको वैशाख १२ गते रिपोर्ट आएको छ । बयलपाटा अस्पतालबाट दुवैको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धनगढीमा पठाइएकोमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको अस्पतालका स्वास्थ्य सेवा निर्देशक डाक्टर विकास गौचनले जानकारी दिनु भयो । एण्टिबडी पोजेटिभ देखिएकालाई आइसोलेशनमा भर्ना गरिएकोमा कोरोना नदेखिएपछि घर पठाउने तयारी भइरहेको डाक्टर गौचनले बताउनु भयो ।
कञ्चनपुर जिल्ला, भीमदत्त नगरपालिका-७ र १८ का दुई जनाको आरडिटी रिपोर्टमा कोरोना पोजेटिभ देखाएको स्वास्थ्य कार्यालय, कञ्चनपुरले जनाएको छ । आरडीटी रिपोर्ट पोजेटिभ आएका दुई जनालाई महाकाली अस्पतालको आइसोलेशनमा राखिएको मेडिकल सुपरभाइजर नारद भट्टले बताउनु भयो ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को सङ्क्रमण फैलिन नदिन दार्चुला जिल्ला दुहुँ गाउँपालिका-३ ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्न थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सबै व्यक्तिको स्वास्थ्य चेकजाँच गरी औषधिसमेत दिइएको वडा अध्यक्ष लालबहादुर बमले भन्नु भयो । लकडाउनपछि हालसम्म क्वारेन्टाइनबाट भागेर तथा भारतका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेर ट्युब, महाकाली पौडिएर वैशाख १२ गतेसम्म २ सय २० जना नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने धार्चुलाका पाँच ओटा क्वारेन्टाइनमा १ हजार ६३ जना व्यक्ति रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले जनाएको छ ।